Golaha wasiirada Itoobiya oo oggolaaday dhismaha ciidamada badda dalka - Caasimada Online
Home Warar Golaha wasiirada Itoobiya oo oggolaaday dhismaha ciidamada badda dalka
Golaha wasiirada Itoobiya oo oggolaaday dhismaha ciidamada badda dalka
Addis Ababa (Caasimada Online) – Golaha xukuumadda Itoobiya ayaa isku raacay sharci qabyo ah oo ku saabsan dhismaha ciidamada badda iyo horumarinta hay’addaha amniga.
Sharcigaan oo ah mid cusub ayaa la hor keenay galaha xukuumadda Itoobiya iyagoona cod aqlabiyad leh ku meel mariyay sharcigaan oo loo gudbin doono baarlamaanka si dhankoodana u ansixiyaan, sida lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Abiy Ahmed.
Sharcigaan ayaa dhigaayo in la dhiso ciidamo xooggan oo badda ah, waxayna noqoneysaa taariikhda Itoobiya oo bad laheyn markii ugu horeysay ee ciidamo badda loo sameeyo.
Qoraal (akhriso) kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in golaha xukuumadda ansixiyeen hindise sharciyeedkaan cusub ee qeexaya dhismaha ciidamo xooggan oo badda ah iyo horumarinta laamaha amniga.
Qoraalka Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay qaab dhismeedka ciidamada cusub ay mudan tahay in dib loo eego qaabka loo dhisayo, kuwaasi oo ay ku jiraan kuwa badda, wuxuuna sheegay in ciidamadaan ay noqon doonaan kuwo la tixgeliyo mustaqbalka.